Wargeysyadu waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan ... | Martech Zone
Talaado, September 5, 2006 Talaado, September 5, 2006 Douglas Karr
Laga soo bilaabo Set blog maanta ku saabsan an article Tifatiraha iyo Daabacaha wixii ku saabsan aragtida Godin ee Yar waa cusub weyn iyo sida loogu dabaqi karo Warshadaha Wargeysyada.
Shirkadaha intooda badan ee raadinaya inay naftooda horumariyaan waxay sameyn doonaan falanqeyn SWOT ah iyagoo isbarbar dhigaya tartankooda. Dhibaatadu waxay tahay in warbaahinta 'maxalliga ah' ay shaqo weyn ka qabteen iska-indhatirka internetka muddo dheer. Ma ahayn ilaa ay Wargeysyadu u dhiibeen dakhli gaar ah liiska Craig iyo eBay in ay ogaadeen in waxaas 'Interweb' uu halkan joogo. Laakiin iyagu weli ma aysan jilcin muruqyadooda gobolka oo ay ka faa'iideystaan ​​meesha ay ku sugan yihiin.
SWOT = (S) xooggooda, (W) taag-darrooyinka, (O) faa'iidooyinka, (T)
Waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah oo wargeysku ka haysto tartankiisa internetka: tabinta maxalliga ah, baahinta maxalliga ah iyo ilaha maxalliga ah. Ma ku aragtaa wax halkaa ka wada dhexeeya? Deegaanka, deegaanka, deegaanka !!! Kuwani waa 3 arrimood oo ay tahay in loo beddelo faa'iidooyin tartan habeennimo! Waxaan ku qaatay mudo ka badan toban sano warshadda wargayska anigoo ka qaylinaya korka sanbabadayda inaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano awooddeena si aan uga faa'iideysano fursadaha aan ku noqon karno deegaanka. Waxay ahayd dhagaha dhegaha la '.
Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in warshadaha wargeysku ay yihiin warshad aan jinsi ahayn. Hogaamiyayaasheeda ayaa wax ku bartay gudaha warshadaha waana dhif in ay katagaan warshadaha hibo. Warshadaha internetka, dhanka kale, waxay kasbadeen hibooyin warshado badan - oo ay kujiraan Wargeysyo (moi).
Ma hubo in furaha uu yahay in wargeysyadu ay u baahan yihiin inay waxyar ka fikiraan, runti waxaan aaminsanahay inay u baahan yihiin oo keliya inay ka faa'iideystaan ​​kala duwanaanshaha ay u leeyihiin ganacsi gobol ahaan. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii ugu fiicnaa ee ay bilaabaan inay fiiriyaan banaanka afartooda gidaar si ay ugu soo jiitaan hibada. Dadweynihii halkaa ku noolaa noloshooda iyaga oo aan aad u wanaagsanayn.
Google Adsense ee Raadinta: Natiijooyinka Cudarada ee WordPress
Taasi waa qodob aad ufiican - isbedelka markasta waa loolan!